महिनौंदेखि नुन खुर्सानीसँग भात खाएर जिविका चलाउँदै ! लकडाउनमा परिवारको विचल्ली (हेर्नुस् भिडियो)
थानकोटको बसन्त टोलमा एउटा यस्तो परिवार छ जो भातसँग नून खुर्सानी खाँन बाध्य छ । भात र तरकारीको स्वाद कस्तो हुन्छ, बिर्सीसक्यो, यो परिवारले । सुशिला शार्कीको परिवारले महिनौ देखि यसरि नै भात र नुन खुर्सानी खाएर जीवन गुजारीरहेका छन् । एक छाक भएपनि मिठो खाने कति धोको होला ? तर मान्छेको विवसता अनि लाचारीले सजिलै कहाँ छोड्छ र ?
रोल्पा घर भइ हाल सुशिला शार्की, उनका श्रीमान र ३ बालबच्चासहित एउटा सानो कोठामा बसीरहेका छन् । कोठा भाडा मासिक १००० रुपैंयाँ पर्छ, तर त्यो तिर्न पनि धौधौ छ । एकातिर घरको यस्तो अवस्था अर्कातिर श्रीमान मानसिक रोगी । मान्छे देख्यो कि त ड’राउँछन् सुशिलाका श्रीमान । मलाई मार्न आउछन् भन्दै आफैँ करेन्ट लगाएर मर्छु भन्छन् उनी । ४ सन्तानकि आमा सुशिलाका १ सन्तान भने उनका आफन्तले पालिरहेका छन् ।
यो दु:ख गर्नु भन्दा त कहिले कहिँ फासी लगाएर मरु जस्तो लाग्ने शुशिला बताउछिन् । यो परिवारको कारुणिक कथालाई हामीले भिडियो मार्फत प्रस्तुत गरेका छौँ । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रीरहेका यो परिवारलाई मनकारी मनहरुले सहयोगको हात अगाडी बढाउन चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।